दीर्घ कोभिड के कारणले हुन्छ ? के यो रोगले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्छ ? - Mitho Khabar
June 26, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on दीर्घ कोभिड के कारणले हुन्छ ? के यो रोगले दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्छ ?
जतिबेला उक्त क्लिनिक खुल्यो, धेरै स्थानीय अस्पतालका चिकित्सकले हाइटमेनलाई फोन गर्न थाले। उनीहरू धेरै युवा तथा रोगका लक्षण नभएका बिरामीमा रोगका सघन लक्षण देखिएकोमा आचश्चर्यमा परेका थिए। ती चिकित्सकको सबैको समान धारणा के थियो भने सुरुमा सामान्य लक्षण देखिएर त्यसपछि धेरै लक्षण एकसाथ देखिएका बिरामी अत्यधिक थिए।
यी बिरामीमा रोगका लक्षण केही साता र महिनासम्म रहेको थियो। यो चिकित्साको हिसाबले अनौठो घटना थियो। ‘यी बिरामीलाई अधिकतर अस्पतालले हेरेका थिएनन् किनभने रोगबाट निको भइसकेका बिरामीलाई हेर्ने पोस्ट कोभिड–१९ क्लिनिक उनीहरूसँगै थिए,’ हाइटमेन भन्छिन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
किन आउँछ श्वासबाट दुर्गन्ध ? नआउन के गर्ने ?